Tallaalkii COVID-19 ee loogu talo-galay Soomaaliya oo la geeyey Kenya + Sababta - Caasimada Online
Home Warar Tallaalkii COVID-19 ee loogu talo-galay Soomaaliya oo la geeyey Kenya + Sababta
Muqdisho (Caasimada Online) – Tallaalkii Covid-19 ee loogu deeqay dalka Soomaaliya oo kamid aheyd dalalka ka faa’iideystay mashruuca COVAX oo ay hirgelisay Hay’adda caafimaadka Adduunka (WHO) oo kaashaneysa isbaaheysiyo dhowr ah ayaa waxa laga dejiyay dalka Kenya.
Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in tallaalkaas oo ah nooca Covaxin oo lagu sameeyay dalka India laga dejiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasi oo 3-dii March laga soo qaaday dalka India si loo keeno Soomaaliya.
“Tallaalka waxa uu yimid oo uu Trasnit ku yahay dalka Kenya, waxaa filayaa in Khamiis ilaa Sabti uu soo galo dalka. Waxaa ka shaqeynayaaye soo dejinta UNICEF iyo WHO oo wuxuu ka yimid India waxa uu hakad ku yahay Kenya, logistics-ka dhinacaas ayey ka imaanaysa oo hay’addaha waxay xafiisyada logistics-ka ku leeyihiin Kenya,” ayey tiri Fowziya Abuukar.
Wasiirada oo la weydiiyay sababta kaliftay in tallaalka uu ku hakado Kenya ayada oo xiisad kala dhaxeyso ayey ku jawaabtay “Caafimaadka siyaasada ma galo oo waxa ka shaqeya UNICEF iyo WHO, weyna imaaneysa (Goojada tallaalka)”.
Wasiirka arrimaha dibedda India Subrahmanyam Jaishankar ayaa horaantii bishan March shaaciyey in India laga qaaday tallaalkii Soomaaliya, islamarkaana uu kusii jeedo caasimada dalka, hase yeeshe waxa 6-dii March laga dejiyay Nairobi.
Cudurka safmarka ah ee Coronavirus ayaa waxa uu markale si weyn ugu soo labo kacleeyay dalka, gaar ahaan Caasimada oo toddobaadyadii u dambeeyay laga diiwaan-geliyay kiisaskii u badna, mana jirto tallaabo adag oo laga qaaday faafitaanka cudurka.
Tallaalka la filayo inuu soo gaaro Soomaaliya ee xiligan yaala Kenya ayaa waxa la ogeyn qaabka loo qeybin doono, inkasta oo ay wasiirka caafimaadka sheegtay in wajiga koowaad lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka oo iyagu la tacaalaya bukaanada uu soo rito cudurkaan.